Avy aiza ny tombotsoan'i Microsoft? | Avy amin'ny Linux
Avy aiza ny tombotsoan'i Microsoft?
Taloha Lohasahan'i Montevideo, solontena iray an'ny Microsoft dia nanao lahateny momba ny vokatra sasany an'ny orinasa ary nilaza zava-misy mahaliana.
Tiako foana ny mitadidy ao an-tsaina sy mampitaha ireo isa marobe izay zakan'ireo olona goavambe. Araka ny slide, Microsoft dia naka vola 60 miliara dolara isan-taona, izay nadika tamin'ny teny espaniola (miliara = iray miliara) hanao 60 miliara dolara.
Mahaliana fa tsy mivarotra mivantana ny vokariny i Microsoft ary isaky ny dolara azo dia mahazo 20 fanampiny ny mpiaramiasa aminy. Ho fanampin'izay, nandany vola efa ho 9 miliara dolara tamin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny teknolojia izy ireo, isa izay tsy latsa-danja noho izany.
Avy aiza ny tombotsoan'i Microsoft:
Ity tabilao manaraka ity dia mampiseho izay fisaratsarahana izay ahazoana tombony bebe kokoa ao amin'ny orinasa Redmond, mizara 5 izy ireo: Office, Server and Tols, Windows, Serivisy an-tserasera sy fialamboly ary fitaovana.
Araka ny efa nampoizina, ny iray amin'ireo vokatra mamokatra tapakila bebe kokoa dia ny fivarotana ny rafitra miasa, Windows. Ny vokatra mitarika hafa dia ilay malaza Office, izany hoe ny efitrano fiasan'ny birao misy Word, Excel, PowerPoint, sns.
Ny kinova Windows server sy ny fitaovana hafa dia eo amin'ny laharana fahatelo, raha ny fizarazarana miadidy ny serivisy sy fialamboly amin'ny Internet tsy ireo no mahazo tombony be indrindra.
Ny famoahana "fatiantoka" na tsy ahazoana tombony betsaka araka ny antenaina dia tsy midika hoe tsy ilaina ny mitazona ny "empira". Tsarovy, ohatra, ny Google sy ny vavahadin-dahatsary YouTube ... nolazaina hatrany fa miteraka fatiantoka ho an'ny motera fikarohana lehibe izany satria lafo ny fikojakojana, saingy raha ny tena izy dia tsy tokony horaisina toy izany ireo fatiantoka ireo. Amin'ny faran'ny andro dia mihena kely ny volavolan'i Google, saingy manome tombam-bidy tena lehibe ho an'ny orinasa ny YouTube.
Ireo data ireo dia hita taratra ihany koa ny fifaninanana henjana misy eo amin'ireo olona goavambe, Windows, Google OS, Office, Google Docs ary lisitra lava serivisy sy vokatra mitady ny toerana misy azy ireo eo amin'ny tsena. Amin'ity lohahevitra ity, amin'ity mandefa amin'ny teny anglisy afaka mahita sary mihetsika 10 ianao izay mampiseho ny tian'ny Google "hamono" an'i Microsoft.
Hita ao | Spamloco
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Avy aiza ny tombotsoan'i Microsoft?
KARETRA DIEGO dia hoy izy:
Lojika izany, raha misy fampandrosoana mandroso toerana lehibe eo amin'ny tsena ary miaraka amin'ireo "fanatsarana" ataoko izay tsy mifanaraka amin'izany, ireo izay tsy manana izany dia terena hividy azy ary manome vola be ... na izy ireo mbola tsy nahita an'io endrika mahatsiravina io izay fanaovana pirinty amin'ny fisie ... tena mahasarika, fampiasana fahatsiarovana tena tsara, tena tsy misy ilana azy amin'ny rafitra hafa toa ny Linux ...
Valio amin'i DIEGO CARRASCAL
AutoScan Network (II): tadiavo ny tamba-jotra ary zahao ireo mpiditra an-tsokosoko